How'd it happen and more reports?: ပိုက်ဆံဘယ်လိုရှာမလဲ? Make Money?
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ"
1. I don't know what I really want-
2. I don't deserve it-
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိုချင်တာနဲ့ မထိုက်တန်
3. I don't have time, money or resources.-
ကိုယ့်မှာ အချိန်၊ ငွေနဲ့ လိုတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ
4. It's too difficult-
5. I have to do it my way-
6. They don't want me to …-
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာထက် အခြားသူတွေ ဖြစ်ချင်တာပဲ
7. I am afraid-
ဒါတွေဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးကြည့်ပါ …..
အဲဒါလေးတွေ တွေးပြီးပြုပြင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်လေးတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကို ရွေးချယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ မအားလပ်လို့ တစ်ဦးချင်း Reply မလုပ်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
1. I don't know what I really want- ကိုယ်လိုချင်တာ ဘာမှန်းမသိတာ
2. I don't deserve it- ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိုချင်တာနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးထင်တာ
3. I don't have time, money or resources.- ကိုယ့်မှာ အချိန်၊ ငွေနဲ့ လိုတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ မရှိဘူးထင်တာ
4. It's too difficult- ကိုယ်လိုချင်တာဖြစ်ဖို့ အရမ်းခက်တယ်လို့ ထင်တာ
5. I have to do it my way- ဘယ်သူ့အကြံဥာဏ်မှ မယူပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်မယ်စဉ်းစားတာ
6. They don't want me to …- ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာထက် အခြားသူတွေ ဖြစ်ချင်တာပဲ စဉ်းစားတာ
7. I am afraid- ဆုံးရှုံးရမှာကို လိုတာထက် ပိုကြောက်တာ
Credit-Naing Win Aung(MBA-UK)